Sary sokitra vita amin'ny zaridaina China vy miaraka amin'ny orinasa mpamokatra hazavana LED sy mpanamboatra | Piedra
Sary sokitra vy
Sary sokitra bronze
Sary sokitra malaza Abstract
Sarin-tsolika amin'ny rindrina
Ny sary sokitra ivelany
Zavamaniry Fiberglass biby
Sarivongana lehibe eny ivelany
Sarivongana firavaka haingo
Sary sokitra vy Corten
Fanamarihana momba ny mpanjifa
Sary sokitra vy misy jiro LED
Model No.: MES63
Nahita ireo sary sokitra vy tamin'ny zaridaina teo aloha ve ianao? Namboarina niaraka tamin'ny endriny hazo nisy jiro LED tao anatiny. Afaka mahita hazavana tsara tarehy ianao avy amin'ny sary sokitra izay haingon-trano ivelany. Ny haben'ny hazo dia azo hatsangana araka ny fanirianao. Na inona na inona endrika, habe na loko rehetra dia tsy maintsy takinao. Ny sary sokitra dia vita tànana izay misy fomba maro amin'ny famoronana sary, famokarana bobongolo 3D, fananganana varahina sy fanantona, voasivana ary fonosana. Ny zavatra azontsika ampanantenaina dia misy kalitao tsara ho an'ny mpanjifa tsirairay, ary eto foana hiandry ny fanontanianao tsara ianao.
Anaran'ny vokatra Sarimihetsika malaza
Item No. MES63
Size Ny habe dia azo namboarina
Tany amin'ny famaranana Surface mirror miaraka amin'ny hazavana taratra
fonosana Pame boaty / boaty vy
Fe-potoana 25-35 andro taorian'ny nahazoana ny fametrahana azy.
Toerana niaviany Xiamen, Sina
OEM & ODM Azo alaina ny serivisy efa natao.
Izahay dia orinasa mpamokatra sary sokitra sy mpanondrana any Xiamen, Sina izay fantatra amin'ny hoe tanin'ny sary sokitra. Ary tena manokana izahay amin'ny fanaovana sokitra stainless varahina, varahina manamboatra, vy vita amin'ny Corten
ary vokatra Fiberglass. Manana vondron'asa sy mpamorona matihanina afaka mamolavola ny sarinao izahay avy eo, ary ataovy sary sokitra tena izy sy tena fiainana. Azonao atao ny mitsidika ny orinasanay alohan'ny hametrahanao filaminana na hijerena kalitao rehefa vita ny sary sokitra.
Horaisina tsara ny fitsidihanao!
1.Mihoatra ny 13 taona ny traikefa amin'ny fanaovana sary sokitra
Ekipa mpamorona 3D Professional
3.P-Tombo-varotra & Aorian'ny ekipa varotra
4.Safidy akora akora misafidy, antsipirihany voakaly sy fifehezana kalitao
5.ODM Serivisy namboarina sy ny vidiny mirary
Previous: Zavamaniry any Abstract Sculptures amidy
Manaraka: Zavamaniry vy ivelany misy ankehitriny ho an'ny trano fisakafoanana
Sary sokitra vita amin'ny metaly
Sary sokitra vita amin'ny metaly maoderina
Sary vongana kanto vita amin'ny metaly ivelany
Sary sokitra metaly ivelany ivelan'ny zaridaina
Sary sokitra vy ankehitriny ho an'ny galeriana
Zavamaniry vita amin'ny metaly milamina miaraka amina endrika miavaka ny Cube ...
Sary sokitra amidy
Camping baoritra miorim-bolo mahatalanjona ...
Sary sokitra vita amin'ny vy tsy misy fangarony ...
Phone + 86-13950080662
Address Room 1407, Changan Bldg, No.75-77 Lvling Road, Distrikan'i Huli, Xiamen, 361009, Fujian, Sina
Sary sokitra Cathy